Fri, Jun 5, 2020 at 8:22am
एफपिओ निश्कासनपछि चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ६० करोड पुग्नेछ। कम्पनीले ८ अर्ब पुर्याउनका लागि बाँकी रकमको बोनस प्रदान गर्नेछ
मंगलवार, २२ जेष्ठ २०७५,	आहाखबर
एजेन्सी, २२ जेठ
एनएमबि बैंकले जेठ ३० गतेदेखि एफपिओ निश्कासन गर्ने भएको छ।
कम्पनीले कुल १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको हो। प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँका दरले जारी हुने बिक्री प्रवन्धक सिटिजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्टले जनाएको छ। बजारमा कम्पनीको मूल्य सोमबारसम्म प्रतिकित्ता ३९५ रुपैयाँ छ।
एफपिओ निश्कासनपछि चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ६० करोड पुग्नेछ। कम्पनीले ८ अर्ब पुर्याउनका लागि बाँकी रकमको बोनस प्रदान गर्नेछ।
इक्रा नेपालले कम्पनीको एफपिओलाई ग्रेड ३ नम्वरको मान्यता दिएको छ। इच्छुकले आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट असार ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन्। न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम ५७ हजार ७० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
बैंकको वित्तीय स्थिति
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म अर्थात ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब ४१ करोड खुद नाफा कमाएको छ। गत वर्षको यस अवधिमा उसको नाफा १ अर्ब १४ करोड थियो।
बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८७ रुपैयाँ छ। प्रतिसेयर मूल्य २९ रुपैयाँ ९ पैसा छ। यो प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा कम्पनीको एफपिओ मूल्यलाई हेर्ने हो भने मूल्य आम्दानी अनुपात ११. ४४ हुन आउँछ।
अर्थात प्रतिफलका लागि कम्पनीको एफपिओ मूल्य महँगो होइन। अर्कोतर्फ एफपिओ जारी गरे पछि पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने भएकाले कम्तीमा ७ प्रतिशत बोनस प्रदान गर्नेछ।
चालु आवको अवधिमा कम्पनीको बजारमा मूल्य प्रतिकित्ता ४९२ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर बजार अहिले घटेकाले अन्तिम मूल्य ३९५ कायम भएको छ।
कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ। एफपिओ निश्कासनपछि यो रकम अझ बढ्नेछ।
कम्पनीको खुद व्याज आम्दानी पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। गत वर्ष १ अर्ब ८५ करोड यस्तो आम्दानी रहेकोमा हाल २ अर्ब १० करोड पुगेको छ।
निश्क्रिय कर्जा घटाउन कम्पनी सफल भएको छ। हाल उसको निश्क्रिय कर्जा १. १ प्रतिशत छ, जवकि गत वर्षको यस अवधिमा यो दर १. ७ प्रतिशत थियो।